सुशान्तलाई सम्झँदै दीपकराज गिरीले लेखे सबैलाई चकित पार्ने यस्तो स्टाटस ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सुशान्तलाई सम्झँदै दीपकराज गिरीले लेखे सबैलाई चकित पार्ने यस्तो स्टाटस !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आ’त्मह’त्याको खबरप्रति नेपाली कलाकारहरुले समेत दुःख ब्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तैमा अभिनेता दीपकराज गिरीले पनि सुशान्तलाई सम्झिएका छन् । दीपकले उनलाई उनकै अभिनय रहेको फिल्म ‘छिछोरे’ को मार्फत सम्झिएका हुन् । गिरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्टाटस लेख्दै सुशान्तप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली ब्यक्त गरेका छन् । सुशान्तसिंह राजपुत जसले फिल्म ‘छिछोरे’ मार्फत आ’त्मह’त्याबि’रुद्ध त्यति मिठो सन्देश दिएका थिए ।
को’रोनाले श्रृजित बिभिन्न स’मस्या मनमा खेलाउँदा डि’प्रेसन हुन सक्ने ख’तरा रहेको समेत देखेको दीपकले को’रोनाको यो म’हामारीको समय आफ्नो र आफ्नो परिवारको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्न समेत सबैलाई सुझाएका छन् ।
उडिरहेको प्लेन भित्र यस्तो हर्कत गरेपछि…
स्वेता खड्काले बिहे गर्न लागेकै होत ? के भन्छिन स्वेता खड्का
उद्योगमन्त्रीलाई ज्यान मा’र्ने ध’म्की, ‘एमसीसी समर्थन गरिस् भने टाउको का’टिन्छ’ !’
प्रक्रिया पुरा नगरी राजधानी नआउनु– १५ सयलाई साँगाबाट फर्काइयो
झुटको प र्दाफास,शिशिर र सरु सुनुवार आ क्रमणशैलिमा आश्रममा पुगेपछि यस्तो च र्काचरकी: भिडियो हेर्नुहोस